Home AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKW FOKWỌ Ndị egwuregwu bọọlụ Brazil Alex Telles Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ
Akụkọ ndụ anyị nke Alex Telles na-agwa gị Eziokwu gbasara akụkọ nwata ya, Ndụ mbido, ndị nne na nna, Ezigbo Ezinụlọ, Nwunye, arsgbọ ala, Wortọ Net, Ndụ, na Ndụ Nke Onwe.
N'okwu ndị dị mfe, anyị nwere ebe a, Akụkọ ndụ nke ndị na-agba ọsọ na Brazil site n'oge ọ bụ nwata ruo mgbe ọ ghọrọ onye a ma ama. Ugbu a, lee bụ ndụ nwata ya ka o bido ibipụta- ọ na-egosipụta nchịkọta doro anya nke Alex Telles Bio.
Ee, ọ bụghị ọtụtụ Fans maara banyere mgba ọ meriri ịghọ ezigbo ọkpụkpọ. N'ikwu nke a, ma eleghị anya, naanị ị maara onye Brazil n'oge ahịa mbufe. Anyị nọ ebe a ịkọ akụkọ ya na enweghị mgbatị ọzọ, ka anyị bido.
Alex Telles Storymụaka Akụkọ:
Maka Biography Starters, aha ya nile bụ Alex Nicolao Telles. A mụrụ Alex na 15th nke December 1992 nna ya, Jose Telles na nne ya, Claudete Telles n'obodo Caxias do Sul, Brazil.
Ndị na-agba ọsọ bọọlụ Brazil bịara n'ụwa dịka ọdụdụ nwa nke ụmụ abụọ amụrụ site na njikọ dị n'etiti nne na nna ya nwere ike ịbụ n'oge 60s. Enweghị ha, ọ gaghị enwe Alex.
Na mbido, obere Alex hụrụ nne ya na nwanne ya nwanyị nke okenye n'anya nke ukwuu. Moreso, o nweghi ike iwepu otu ubochi ma obu abuo n'enweghi ihe ndi ozo.
N'oge ahụ, nwatakịrị ahụ na-agba ọsọ ọsọ nke ị ga-eche na ọ bụ Usain Bolt na-agbanwe.
Ọsọ ya dị oke nkwenye na ndị enyi ya enweghị ike ijide ya. Nke a bụ echiche dị obere banyere nwatakịrị nwoke siri ike nke na-amaghị na ọ ga-abụ onye ukwu na ndụ.
Alex Telles Ezinụlọ:
N'adịghị ka echiche gị, nne na nna Telles abụghị mgbe niile bara ọgaranya. O tolitere n'ezinụlọ nke etiti. Otú ọ dị, ezinụlọ ya nwere afọ ojuju n’ihe niile ha nwere. N'ihi ya, ndụ kaara ha mma.
Dịka nwatakịrị, Telles keere onye ọ bụla nọ n'ezinụlọ ya mmekọrịta na-enweghị nghọta. Nke bụ eziokwu bụ na nwanne ya nwanyị enweghị ike ịhụ anya ịhụ ya ka ọ na-ebe akwa. N'ihi ya, ọ mere dị ka nwanne okenye nke na-enweghị nchebe ma gbalịsie ike ichebe ya karịsịa pụọ ​​n'aka ndị ọchọ okwu. Nke a bụ Nnukwu Nwanyị nke na-enwetaghachi azụ site na nwata.
Radja Nainggolan Child Story Plus Ihe na-emeghi ihe omuma
A na-ekwukarị na apụl anaghị ada n'akụkụ osisi apụl. N'otu ụzọ ahụ, Alex emeghị ihe n'àgwà nna nna ya hà. Dị ka anyị niile maara, Brazil ejirila egwuregwu ndị na-enweghị atụ mara ụwa niile, na ahapụrụ Telles na ndepụta ahụ.
Obi abụọ adịghị ya na ezinụlọ Telles gbanyere mkpọrọgwụ na Caxias do Sul ebe amụrụ ya. Agbanyeghị, agbụrụ ya abụghị naanị na Brazil kamakwa ọ gụnyere Italy n'ihi na nne na nna ochie ya bụ ndị Itali.
You maara?… Ebe Alex Telles nke Mmalite, Caxias do Sul bụ obodo nke abụọ kachasị ukwuu na Rio Grande do Sul, Southern Brazil. Ọ bụ obodo mepere emepe, nke ndị immigrantstali kwabatara na narị afọ nke 19.
Alex Telles Football Akụkọ:
Onye na-eto eto Brazil ahụ enwebeghị ịhụnanya na mberede maka football. Kama nke ahụ, o ji nwayọọ nwayọọ nwee mmasị na ndị ọzọ na-egwu egwuregwu na-agba bọl n'okporo ámá.
Ka ọ na-erule oge Telles bụ 8, o kwenyesiri ike na ọ ga-agbaji nsogbu niile iji bụrụ onye egwuregwu bọọlụ a na-asọpụrụ. N'ihi ya, ya na ndị ọgbọ ya na-egwu bọl n'okporo ámá.
Afọ ole na ole igwu egwu n'okporo ámá hụrụ Telles ka ha debanye aha na Esporte Clube Juventude agụmakwụkwọ ntorobịa na 2007.
N'ịhụ na ọ hụrụ mmezu na ịgba bọl na agụmakwụkwọ, Telles tinyere ike ya niile n'ịrụ ọrụ ya. Ndị otu anyị gosipụtara Esporte Clube Juventude agụmakwụkwọ agụmakwụkwọ mbụ ya.
Alex Telles Biography - Ndụ Ndụ Mmalite:
Kwere ya ma ọ bụ na ọ bụghị, onye Brazil ji ọzụzụ kpụ ọkụ n'ọnụ ruo ọtụtụ afọ tupu ọ nweta ihe ùgwù nke igwu egwuregwu ndị a ma ama. Mgbe oge ruru ya, na 18 gbara ụgwọ maka ụlọ ọrụ ọkachamara mbụ ya (Juventude).
Onye na-eto eto malitere ọrụ ọrụ ya site n'igosipụta nkà ya, ihe ngosi nke nyeere Juventude aka inweta 2011 na 2012 Copa FGF.
Obere otu afọ mgbe o gosipụtara ihe dị iche, e zigara Telles na Gremio ebe ọ meriri onyinye kacha mma n'aka ekpe karịa ugboro abụọ.
N'ikpeazụ, ọ sonyeere Galatasaray na 2014 ma nyere ọgbakọ ahụ aka ịrapara n'ọtụtụ trophi gụnyere Super Lig, Turkish Cup na Turkish Super Cup.
Alex Telles Bio - Tozọ Na-ewu ewu Akụkọ:
Mgbe ọ rụzuru ọtụtụ ihe mgbe ọ dị obere, Brazil malitere ịdọta ndị otu kachasị. N'otu oge na 2015, Telles nụrụ asịrị ka ọ bụrụ nhọrọ kachasị mma iji dochie anya Filipe Luis na Chelsea. Otú ọ dị, ụlọ ọrụ Bekee adabaghị na nkwekọrịta ọ bụla. N'ezie, hapụrụ ya na ndakpọ olileanya.
Ọzọkwa, mgbe ọ na-enwetakwu ihe maka Galatasaray, mmiri mgbazinye ego mere ka ọ pụọ na klọb ahụ.
O were Telles maka ntachi obi iji mara Inter Milan, bụ onye bịanyere aka na ya maka ịgbazinye ego otu afọ na 2015. Ihe gbagwojuru anya ka ọ hụghị onye nkuzi Galatasaray ọ hụrụ n’anya, Roberto Mancini, na klọb ọhụrụ ya.
Alex Telles Biography - Akụkọ nke Successga nke Ọma:
Na Inter Milan, uba hụrụ Telles ka ọ bịanyere aka na nkwekọrịta nkwekọrịta contract 6.5 na FC Porto na ọnwa nke July 2016. N'ezie, isonyere ndị Portuguese nyere ya oge igwu egwu na ikpughe.
N'ihi ya, Alex Telles mechara nweta mmeri Primeira Liga nke ọnwa na ọtụtụ onyinye ndị ọzọ yana trophies na FC Porto.
Ọsọ ọsọ gaa n'oge edere Alex Telles Bio, obi abụọ adịghị ya, otu n'ime ndị na-agbachitere agbachitere ụwa. N'agbanyeghị nke ahụ, mmetụta ya ka na-eche na FC Porto ruo taa.
Okwesiri ka ekwuru ya, ndi ezin’ulo ya nile nwere obi uto na Brazil mechara kwenye na Alex Telles nwere ike ịgba egwu na 2019.
N'ihi ya, Telles mere mmalite nke obodo ya na ụbọchị 23 nke Machị 2019. Ndị ọzọ, dị ka ha na-ekwu, bụ akụkọ ihe mere eme.
Gba egwu Brazil bụ otu n'ime ihe kacha mma Telles.
Ndụ mmekọrịta mmekọrịta Alex Telles:
N'adịghị Gabriel Magalhaes kemgbe 2020, Telles nwere ifịk ịhụnanya-ndu. N'ezie, o yiri ka a na-emikpu ya kpamkpam n'oké osimiri nke ịhụnanya ya na enyi ya nwanyị ghọrọ nwunye.
Nsonaazụ sitere n'ọmụmụ ihe anyị gosiri na ejikọtara ya na naanị otu nwanyị kemgbe ọ bụ nwata ruo ụbọchị. Ekwenyesiri m ike na ị ga-achọ ịmata onye nwanyị nwere ihu ọma na Bio ya. Gụọ na!
Banyere Alex Telles Nwunye:
Akụkọ ịhụnanya ha enweghị obi abụọ, mara mma na-adọrọ mmasị. Onye Brazil na-atụgharịkarị uche na peeji nke Instagram ya ịkekọrịta foto nke ọmarịcha nwunye ya, Priscila Minuzzo.
Kedu ihe ọzọ? Alex na nwunye ya kekọtara eriri na ụlọ ụka St. Pelegrin na ụbọchị isii nke ọnwa Juun 6. Kemgbe ahụ, ndị di na nwunye hụrụ ibe ha n'anya karịa nke a na-enweta na opera soap. Nke a bụ nkọwa nke agbamakwụkwọ Alex Telles na Priscila Minuzzo.
Bịanụ! Enwere m olileanya na kpakpando ndị ọzọ na-abịa Brazil dị ka Vinicius Junior ga-amụta site na ndụ mmekọrịta ya. Obere ihe m chefuru, ọ dị ka Telles nwere nwatakịrị n'oge ọ na-ede Bio ya.
Ohere inweta nwa nwoke di elu nke ukwuu dika o na-egosiputa obere foto nwata dika ndi ezin’ulo ya. Nke a nwere ike ịbụ nwa Alex Telles?
Ndụ ezinụlọ nke Alex Telles:
Ezi ọzụzụ ụlọ na-eme ka ndị mmadụ pụta ìhè. Kwere ya ma ọ bụ na ọ bụghị, Telles Life Story agaghị emezu ma ọ bụrụ na ọ bụghị maka ihe mmụta mbụ ọ natara n'aka ndị mụrụ ya. Ugbu a, ka anyị kọwakwuoro gị ihe gbasara ndị ezinụlọ ya bido na ndị mụrụ ya.
Banyere Alex Telles 'Nna:
Nna Brazil, Jose Telles bụ isi mmalite dị ukwuu nke nnukwu ọfụma football. Ekwela ka ọ ju gị anya ma m gwa gị na Jose bụbu ndị ịgba bọọlụ.
Otú ọ dị, ọ kwụsịrị ịgba bọl mgbe ọ dị afọ 19 iji lekwasị anya na ọrụ ya dị ka onye na-enyere aka na-arụ ọrụ iji gboo mkpa ezinụlọ ya. Zute nna Alex Telles, Jose Telles ka ọ na-amụmụ ọnụ ọchị site na agba na agba.
You maara? Goal Ihe mgbaru ọsọ mbụ nke Telles maka Gremio bịara n'ihi mkpali o nwetara site na nna ya. N'ime ekele nke nna ya maka ịkpali ihe mgbaru ọsọ ya mbụ, Alex Telles kwuru;
“Beingbụ onye ọkpụkpọ bụ nrọ. papa m amataghi na m biri ya. Obi dị m ụtọ ịrụzu ihe ahụ m kpebiri ime. ”
Kwere ya mgbe m gwara gị na nna Alex Telles bụ Jose Telles ka dabara adaba, ọbụlagodi na agadi ya. N'ụzọ na-akpali mmasị, ọ na-esonye otu ugboro ma wuchaa marathon 15km mgbe ọ dị afọ 61. Lelee nnukwu egwuregwu nke papa.
Banyere mama mama Alex Telles:
Ezigbo nne amụtala ụmụ nwoke na-aga nke ọma ma ọ bụghị otu. Nwa nwoke na nwa nwoke nke na-apụ n'etiti Alex Telles na nne ya, Claudete enweghị ike ịgbagha.
Onye ọkpụkpọ Porto na-agakarị na ibe ya na Instagram na Facebook iji gwa maka oke ịhụnanya ya maka nne ya. Zute ya ọzọ Claudete Telles, ka ọ na-amụmụ ọnụ ọchị site na agba na agba.
Alex na-enye ọmarịcha okwu na nkọwapụta foto nne ya, nke na-ekwupụta ya dị ka nne kachasị mma n'ụwa. See hụrụ, Claudete Telles na-akwado ọrụ nwa ya nwoke.
Mgbe mgbe, ọ na-aga n'ámá egwuregwu iji lee ya ka ọ na-egwu egwuregwu. O doro anya na mama ya yiri ka ọ bụ onye na-akwado ya.
Banyere Nwanna Nwanyị Alex Telles:
N'ihi nwanne ya nwanyị nke okenye, bụ Hellen, Telles nwere obi ụtọ n'oge ọ bụ nwata. N'agbanyeghị na ụmụnne nwere ike inwe nghọtahie, ha na-akwado ibe ha karịa etu ndị mmadụ chere.
N'ụzọ na-akpali mmasị, nwanne nwanyị Telles na-elekọta ya anya kemgbe ha dị obere. N'ihi ya, ọ chọghị mkpa nwanne. N'okpuru ebe a, ma nwanne nwoke ma nwanne ha na-emekọrịta ihe.
Banyere ndị ezinụlọ Alex Telles:
Otu n'ime ihe ndị na-eme ka uche ya dịrị bụ ezinụlọ ya. Ka oge na-aga, nwatakịrị ahụ enwetawo ekele dị ukwuu site n'aka ụmụ nwanne nne ya, ndị nne na nna ya na ndị nne na nna ya kpaliri ya. N'ihi ya, ọ na-agbasi mbọ ike ka ọ ghara imechu ndị ikwu ya ihu.
Otú ọ dị, Telles ekwughị banyere nna nna ya na nne nne ya. Anyị nwere olile anya na ọ ga-akọrọ ụwa akụkọ ha n'oge na-adịghị anya.
Alex Telles Ndụ Nke Onwe:
Ekwu okwu banyere ndị na-agba ụkwụ ụkwụ nwere obi ike na ike ha, m ga-atụkwa Alex aka. Onye na-agbachitere FC Porto adịghị atụ egwu ịnagide ihe ịma aka ọ bụla n'isi. E wezụga ịgba bọl, ọ hụrụ egwu n'anya.
O juru ya anya? Onye na-agbachitere FC Porto dị mma na ịbụ abụ mara mma. Onye ma, o nwere ike ịbụ na ọ gụrụla egwu ma ọ bụrụ na ịgba bọl ga-emeli ya.
Site n'oge ọ bụ nwata, Telles mepụtara omume nke ileta osimiri. Ọbụna n'oge ebube ya, onye Brazil ka na-ewepụta oge iji soro ndị enyi ya nọrọ jụụ n'ụsọ osimiri na yachts. Mgbe ụfọdụ, ọ na-etinye onwe ya na sọfụ ebili mmiri ya na bọọdụ ya.
Ndụ Alex Telles:
Kwere ma ọ bụ na ọ bụghị, Telles egosila na o doro anya na ọ na-ebi ndụ obi ụtọ. Agbanyeghị na ọ kpakọbara onwe ya akụnụba, anaghị amanye ya igosipụta ibi ndụ okomoko ya.
Otú ọ dị, ọ na-ele mmekọrịta ya na ndị ọ hụrụ n'anya anya dị ka ihe onwunwe kachasị ukwuu a na-apụghị ịgbanwe agbanwe.
Alex Telles Net thtọ:
Gba egwu maka klọb a ma ama n'ụwa niile na-eme ka usoro ego dị mkpa maka Telles. N'ezie, n'ime afọ 2020, ọnụego Alex Telles ruru ihe ruru € 40 nde. Na FC Porto, onye Brazil na-akwụ ụgwọ ụgwọ kwa afọ nke million 2 nde.
Tellọ Alex Telles na Cgbọ ala:
N'ihi na Telles na-egwuri egwu na Njikọ Mba ya, ọ dịrịla ya mfe inwe ụlọ ya na ụgbọ ala ya. Agbanyeghị, ọ nweghị mmasị ịkekọrịta foto nke akụ ya dị oke ọnụ na soshal midia.
Eziokwu nke Alex Telles:
Iji chịkọta akụkọ ndụ anyị, lee ụfọdụ eziokwu ole na ole ga - enyere gị aka ịghọta akụkọ ndụ ya nke ọma.
Eziokwu nke 1: Nkwụ ụgwọ ụgwọ ụgwọ ọnwa ya
Kwa Afọ € 2,000,000
kwa ọnwa € 166,667
Kwa Izu € 38,402
Kwa .bọchị € 5,486
Kwa elekere € 229
Kwa Nkeji € 3.8
Sekọnd € 0.06
Ọzọkwa, anyị ejirila nlezianya tụlee ụgwọ ọrụ Alex Telles dị ka elekere na-akụ. Biko, lee ụgwọ ọnwa ya anya na nke abụọ ma hụ ego ole ọ ritere kemgbe ị bịara ebe a.
Nke a bụ ihe Alex Telles akwụla ụgwọ kemgbe ịmalitere ilele Bio.
Eziokwu nke 2: Onye nnochite anya nke Os Maiores Pequenos Heróis oru:
N'ịchọ imeri ajọ ọgụ ahụ megide ọrịa kansa, a họpụtara Telles onye nnọchi anya nke ọrụ Os Maiores Pequenos Heróis na 2018.
N'ihi ọdịdị ọdịmma ya, ọ nakweere ibu ọrụ dị mma na ebumnuche nke ịchekwa ọtụtụ ndụ site na ọrịa ha na-atụ ụjọ.
Afọ ole na ole tupu Telles enweta nsọpụrụ, o gosipụtara mmasị dị ukwuu na-enyere onye ọrịa kansa aka. N’otu n’ime ọtụtụ nleta ọ gara leta ndị o metụtara, o kwuru;
“Gaa na Institutelọ Ọrịa Cancer Childrenmụaka! Ha ọchị bụ kacha mma ntaramahụhụ! Amụtara m ezigbo ihe na ndụ site na nleta a taa! ”
Eziokwu nke 3: Alex Telles Nkịta:
Otu ihe dị ka ya na ezinụlọ ya niile bụ ịhụnanya ha nwere maka nkịta. Ọ na-esiri ya ike ịga otu ụbọchị n'ejighị anụ ụlọ ya na-egwuri egwu.
Ọ bụrụ na ị maghị, kpakpando FC Porto nwere nkịta abụọ nke pụtara ya ọtụtụ ihe. Lovehụnanya o nwere maka nkịta enweghị atụ.
Eziokwu nke 4: Alex Telles igbu:
Agaghị agọnahụ eziokwu ahụ na Telles etinyela ọtụtụ akara na ahụ ya. Maka ndị gị na-elele anya ka ọ na-egwuri egwu, ejiri m n'aka na ọ ga-abụrịrị na ị masịrị akara ngosi ya na-adọrọ adọrọ nke dị na aka ekpe ya. Hụ otu o si egosipụta egbugbu ya na-amaghị ama.
N'ezie, echiche ya banyere inking yiri nke ahụ sitere na nke ndị agbụrụ Brazil ibe ya, Anderson Talisca.
Eziokwu nke 5: Alex Telles Okpukpe:
Onye ọ bụla maara na Brazil bụ mba okpukpe nke ọtụtụ ụmụ amaala ya na-ekpe Katọlik.
Dị ka Ferran Torres na Onye na-eche banyere ya, Telles bụ onye Katọlik hụrụ okwukwe na okwukwe Ndị Kraịst ya anya. Ọ na-ebunyekarị foto ụfọdụ nke aka ya nke emebere na ndabere nke nwere Lady anyị (Meri, nne Jizọs).
You maara?… Alex Telles ahọrọghị uwe elu ya nọmba 13 ka ọ ghara ịdaba. Kama nke ahụ, ọ họọrọ ọnụọgụ iji kwanyere mpụta nke Meri ugwu, nke mere na Portugal n'ụbọchị nke iri na atọ nke ọnwa ọ bụla (site na Mee ruo Ọktọba) na 13.
Eziokwu nke 6: Ọmarịcha Fifa Rating:
Omume Alex Telles emeela ka Fifa tinye ya na ọkwa dịka Marcelo na Dan Alves.
Enweghị obi abụọ, ọ ga - abụ nnukwu nchekwa ma ọ bụrụ na Telles ga - ewere nkwekọrịta ahụ igwu egwu n'akụkụ Wan Bissaka, Maguire, na Lindelof. Lelee stats ya n'okpuru, nwoke ahụ enweela ihe niile.
Iji nweta nchịkọta ngwa ngwa nke Bio ya, nke a bụ tebụl na-egosipụta profaịlụ Alex Telles ya.
Aha n'uju: Alex Nicolao Telles
Ụbọchị ọmụmụ: 15th December 1992
Ebe amụrụ onye: Caxias mere Sul
Nna: José Telles
Nne: Claudete Telles
Ụmụnne: Hellen Telles
Nwunye: Priscila Minuzzo
Ahịa ahịa: € 40.00m
Atụmatụ Atụmatụ Kwa Afọ: € 2 nde
Ọkachamara: Onye na-agba bọl
Ihe omume: Bụ Abụ na Surf
elu: 1.81m (na mita) na 5 ′ 11 ″ (na ụkwụ)
N'ikpeazụ, anyị kwesịrị ịma na ọ dịghị onye ga-enyere anyị aka imezu nrọ anyị belụsọ anyị. Ka anyị mụta ihe site na akụkọ ndụ Alex Telles ma rụọ ọrụ n'ụzọ anyị ruo n'ogo nke ọrụ anyị.
Cheta, ị gaghị enwe ike mezuo nrọ gị ruo mgbe ịnwa ime ya. Anyị na-ekele nne na nna Alex Telles na nwanne nwanyị nwanyị buru ibu maka inye aka na àgwà ya pụtara ìhè.
Ebe anyị nọrọ ọtụtụ oge na Alex Telles Biography, anyị kpebiri ịkwụsị ya ebe a. Buru n'uche na ndị otu anyị na-agbasi mbọ ike inye gị ọdịnaya dị mma.
Agbanyeghị, ọ bụrụ na ịchọta ihe ọ bụla nke na-adịghị ka ọ dị mma na Bio nke Telles a, Jiri obiọma kpọtụrụ anyị.